हाम्रो करबाट पालिने सांसद र प्रदेशहरु धेरै भयो, यो कटौती नगरेसम्म विकाश हुदैन: डा.रुईत
नेपालमा सबै क्षेत्रलाई यसरी राज’नीतिकरण गरियो कि यसले जनतालाई कहिले पनि फलि’फाप दिएन । प्रजा’तन्त्रबाट फ’लिफाप पाउनको लागि नेपालको हरेक क्षेत्रमा भईरहेको अति राजनैति’ककरण रोकिन जरुरि छ नत्र प्रजा’तन्त्रको कुनै अर्थ देखिदैन ।
प्रजातन्त्रको अर्थ लोकक’ल्याणकारी राज्य सत्ता भनिन्छ तर नेपालको प्रजा’तन्त्रले खै लोकक’ल्या’णकारी काम गरेको ? नेपालमा चाहिने भन्दा धेरै राज’नीतिज्ञहरु पो भए कि ! राज’नीतिज्ञहरुको संख्या आधि मात्र या एक चौथाई मात्रै भए पनि पुग्छ कि ? यो संख्या घटाएर सबै जनाले कुनै एक इल’मयुक्त काम किन नगर्ने ?
ताप्लेजुङको ओलाङचु’गोलामा सन् १९५४ सेप्टेम्बर ४ तारिखका दिन बुवा सोनाम रुइत र आमा केसाङ रुइत सन्तानका रुपमा ज’न्मिएका रुईतका श्री’मती नन्दा रुइत हुन् । रुईतका पिताले पु’र्ख्यौली ति’ब्बती गाउँ रुथोकको सम्झनामा रुइत थर थपेका । ति’ब्बती भाषामा सन्दुकको अर्थ आकाशको ड्र्या’गन भन्ने हुन्छ ।
झाडा’पखालाले दाजु र ज्व’रोले बहिनीको मृ’त्यु, काठमाडौंमै सन्दुकसँगै बसेर पढिरहेकी बहिनी याङ्ला’को क्षय’रोग बल्झेर निधन/ बहिनी याङ्ला’बाटै डा’क्टर बन्ने प्रेरणा पाएका रुइतले सातवर्षको उमेरमा सेन्ट रो’बर्टस् स्कुल दा’र्जिलिङमा भर्ना भएर पढाईलाई अघि बढाएका हुन् ।
अहिले तिलगंगा अस्पताल मानव संसाधन तालिम के’न्द्रको रुपमा स्थापित । उपाधि र पु’रस्कार – भारतको लखनउस्थित किङ ज’र्ज्स मेडिकल युनि’भर्सि’टीमा एमबीबीएस पढ्दा शल्य’क्रियामा गोल्ड मेडल, रमन म्याग्सेसे पुर’स्कार – सन् २००६, भारत सरकारद्वा’रा पद्मश्री पुरस्कार – सन् २०१८, भुटानमा अ’न्धोपन निवार’णसँगै सयौ व्यक्तिको दृ’ष्टि
फर्का’उन विशेष योगदान पु’र्याएबापत २०७२ सालमा भुटानको उच्च सम्मान ‘नेसनल अर्डर अफ मेरिट गोल्ड’ बाट सम्मानित, प्रधानमन्त्री रा’ष्ट्रिय प्रतिभा पुर’स्कार नेपाल सरकार २०७५, सुप्रसि’द्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम) मा’नपदवी २०७६ उपलब्धि- विश्वमा अधिकाँश विका’सोन्मुख देशहरूमा गएर सेवा, बिश्ववि’ख्यात सरल र कम लागतको
मो\_तिबिन्दुको चिकि’त्सा प’द्धति ‘रुईतेक्टोमी’का प्रव’र्त्तक। उत्तर कोरियामा गरेको कामलाई लिएर नेशनल जियो’ग्राफिकमा वृत्त’चित्र प्रशारित । नेपालका गाउँ गाउँमा मोति’याविन्दुको उपचारमा गरेका कामलाई लिएर अलजजिरा, सिएनन लगायतमा वृ’त्त चित्र र फि’चर प्रशारित ।
यस्को उत्पादन तीन गुना बढाउने सन्दु’कको यो’जना छ । प्रोफे’सर एलेन रोबिन यथास्थि’तिलाई सका’र्न इन्का’र गर्ने अर्का स्टिभ जब्स’को जस्तै मान्छन् डा. रुइतलाई । ल्ल शल्यक्रिया गरी आँखाभित्रै लेन्स प्रत्या’रोपण गरेर नेत्र’ज्योति फ’र्काउने सरल चिकि’त्सा विधि हेनरी फो’र्डले अमेरिकामा मोटर’गाडी बनाएजस्तै मान्छन् अस्ट्रे’लियाली नेत्र विशेषज्ञ ग्यारी ब्रायन ।